Avereno jerena aho! Famahanana bilaogy ho an'ny Dolara | Martech Zone
Zoma 17 Novambra 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Lahatsoratra navoaka: ReviewMe
Rehefa nipoitra voalohany ny PayPerPost sy ReviewMe dia diso fanantenana aho. Tena tsapako ho toy ny hoe handray anjara amin'ny ratsy indrindra ny 'fitorahana bilaogy dolara'. Androany hariva aho dia nahatsikaritra lahatsoratra vitsivitsy tao amin'ny bilaogy hafa fa ny ReviewMe dia nampiasa ny rafitr'izy ireo manokana handoavana bilaogera handinihana ny tenany. Nahasarika ny saiko izany ka nisoratra anarana hijery an'io aho.
Hevitra mahaliana izany. Miorina amin'ny fisehoan'ny bilaoginao (Alexa, Technorati, RSS, sns.), Ny bilaoginao dia omena vola dolara izay homena anao rehefa mahavita famerenana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia omena onitra ianao araka ny isan'ny olona mamaky ny bilaoginao. Tsy hevitra ratsy. Heveriko fa mety ho fomba tena tsara ho an'ny mpanao dokambarotra izany. Misimisy kokoa momba izany…
ReviewMe dia tsy mitaky fanoratanao hevitra tsara! Raha atao teny hafa, dia afaka milaza ny marina tanteraka ianao. Heveriko fa hahasarika ireo mpanao dokam-barotra miaraka amina vokatra tena tsara izany, fa ny ReviewMe kosa handroaka ireo mpanao dokambarotra tsy mahalala fomba. Hey! Tsara ho antsika roa izany, sa tsy izany? Ny zavatra farany tiako hatao dia ny fandefasana ireo olona mamaky ny bilaogiko mba hanandramana mahazo vola roa. Mety hampidi-doza ireo mpamaky ahy izany ary izany dia zavatra iray izay napetrako tao anatin'ny fotoana be dia be nanandrana nanangana. Tsy manana anarana lehibe na dolara amina miliara aho, ka kely aho. Mirona amin'ny zazalahy lehibe ny olona.
Ny zavatra iray tiako indrindra dia izy ireo te azonao mazava tsara fa lahatsoratra bilaogy no ahazoanao onitra:
Tsy maintsy ambaranao fa ny paositra dia paositra misy vidiny. Ireto misy hevitra vitsivitsy: "Sponsored Post:", "Ity manaraka ity dia famerenana karama:" "Doka:".
Ka raha ny fijeriko ny raharaha dia manaja ny serivisy ReviewMe aho ary mirary soa azy ireo! Indraindray aho tena manana olana amin'ny fiezahako mieritreritra lahatsoratra hapetraka, saingy tafahitsoka eo anelanelan'ny vato sy ny toerana sarotra aho. Raha tsy mandefa isan'andro aho dia mahita fironana amin'ny fifamoivoizana midina. Raha mandefa isan'andro aho dia mahita fiakarana anaty fifamoivoizana. Mpanjaka ny atiny IS miaraka amin'ny bilaogiko. Ny tsy tiako atao dia ny mandany ny fotoananao eto. Ka noho izany dia hadinoko ireo lahatsoratra tamin'ny andro sasany izay tsy nananako zavatra namboarina nanampy ny resadresakay.
Handramako vetivety ny ReviewMe… tsy loharanom-bola, fa ho hitako raha afaka mameno ireo 'banga' ao amin'ny toerana tokony hametrahako zavatra momba izany nefa tsy ampy ny tohiny. Ho marin-toetra aminareo olon-kafa koa aho, ary hampahafantatra anareo ny zava-mitranga. Tsy te hametraka loza amin'ny fifandraisanay aho!
Raha ny momba ny serivisy dia mandroso tsara izy io. Tsy maintsy milaza aho fa misavoritaka toy ny helo ilay tranonkala! Misy ny fizarana dokam-barotra sy ny fizarana bilaogera. Tsotra fotsiny ny mamantatra hoe iza amin'ny tsipika misy anao, fa ny tranokala dia tsy napetraka toy izany. Misy menio marindrano, menio ankavia, avy eo safidy ao anatin'ny faritra atiny, menio an-tongotra…. Mbola tadidiko ny fahitako ny filaharako any any fa tsy hitako izay fomba hiverenana any !!
Ka… vokatra tsara, fampiasa malemy. Ny torohevitro dia ny hahatongavan'ireo olona ao amin'ny ReviewMe hamaritra ny fizotry ny raharaham-barotra izay hataon'ny mpanao dokam-barotra na ny bilaogera amin'ny alàlan'ny tranonkala… fisoratana anarana, manampy bilaogy, manampy famerenana, fametrahana fandoavam-bola sns. fizotry ny ambaratongam-pahefana sy ny orinasa. Mieritreritra aho fa hanao fanavahana LEHIBE eo amin'ny pejin'ny mpanao dokam-barotra sy ny bilaogera ary ny fizotrany. Ny fananana ny bokotra etsy ambony dia somary hafahafa ary tsy miraikitra.
Ie, izay e! Ity no famerenako voalohany amin'ny ReviewMe… an'ny ReviewMe! Manantena aho fa mankasitraka ny hatsarako ianao.
Fa maninona no miala ny mpiasa lehibe? Fa maninona no orinasa lehibe no mbola mila manangona?
Dec 1, 2006 ao amin'ny 1: PM PM
Fanaraha-maso: Nahazo ny fandoavam-bola tamin'ny alàlan'ny Paypal aho androany.